Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. डोल्पामा अहिलेसम्म कै ठूलो सडक दुर्घटना – Emountain TV
डोल्पामा अहिलेसम्म कै ठूलो सडक दुर्घटना
डोल्पा, २० कात्तिक । डोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा १० जनाको ज्यान गएको छ।
एक जना बेपत्ता छन् भने दुई जनाको उद्धार गरिएको छ। सदरमुकाम दुनैबाट १३ यात्रु बोकेर त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको सुँपानी जाँदै गरेको भे१ज १६११ नम्बरको जिप ठूलीभेरी नगरपालिका ९ कालागौंडामा दिउँसो साढे दुई बजेतिर भेरीमा खसेको थियो।
घटनामा परी मृत्यु हुनेमा त्रिपुरासुन्दरी १ का ६५ वर्षीय नरसिंह कठायत, ४८ वर्षीय हेमराज हमाल, २५ वर्षीय शेरबहादुर थापा, वडा नम्बर २ का २४ वर्षीय कुमार रोकाया, १३ वर्षीया अस्मिता रोकाया, वडा नम्बर ३ का ४५ वर्षीय बोध धराला, १५ वर्षीया मनिषा धराला, वडा नम्बर ५ की २५ वर्षीया लक्ष्मी रोकाया, १२ वर्षीय यम रोकाया र ठूलीभेरी ५ का भद्र रोकाया छन्। उनीहरूको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो।
जिप दुर्घटनापछि दुनै शोकमा डुबेको छ। यो घटना डोल्पाको इतिहासमै ठूलो भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताए। उनले भने, ‘ डोल्पामा आजसम्म १८ जनाको ज्यान गइसकेको छ तर यो घटना सबैभन्दा ठूलो हो। म धेरै दुःखी छु। सकेजति उद्धार भयो, तर सबैको ज्यान बचाउन सकिएन।’
हेमराज हमाल लिकु संयुक्त क्याम्पसका प्रमुख हुन्। उनी त्रिपुराकोट माविका प्रधानाध्यापक थिए। तिहार मनाउन घर जाँदै गरेकी १३ वर्षीया अस्मिता रोकायाले समेत ज्यान गुमाइन्।
चालक बोहोराले भने, ‘उकालोमा गाडीको गति राम्रै थियो। ब्रेकले काम गरेन। मैले मोडमा मोड्न प्रयास गरें। त्यसपछि मलाई केही थाहा छैन।’ घाइते यात्रु थापाले पनि भेरीमा गाडी खसेपछि आफू बेहोस भएको बताए। डाक्टर शाहीका अनुसार दुवैको अवस्था गम्भीर रहेको छ।
राजमार्गसँग नजोडिएको जिल्लामा झण्डै २८ किलोमिटर आन्तरिक सडकमा जिप सञ्चालन भइरहेका छन्। धुलैधुलो, कच्ची र घुम्ती नै घुम्ती रहेको डोल्पाको सडकमा २०६९ सालको फागुनमा हेलिकप्टरबाट जिप पुर्‍याइएको थियो। डोल्पामा १० वटा निजी जिप चलिरहेका छन्। तर, सडक विभागले अनुमति दिएको छैन। ती जिपहरू डोल्पाको आन्तरिक सडकमा दुनै जुफाल, दुनै सुँपानीमा यात्रु र सामान ढुवानी गर्छन्।
यसैबीच डोल्पा (ख) का प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले जिप दुर्घटनामा दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली एवं घाइतेको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।